Daawo Sawirro: Ninkii masjidka dhexdiisa ku dilay sheekh Madeer Madgaab oo dil toogasho lagu xukumay | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Ninkii masjidka dhexdiisa ku dilay sheekh Madeer Madgaab oo dil toogasho lagu xukumay
Daawo Sawirro: Ninkii masjidka dhexdiisa ku dilay sheekh Madeer Madgaab oo dil toogasho lagu xukumay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun ku riday ninkii dilay sheekh Madeer Madgaab Aliyoow xili uu ku jiray salaada Taraawiixda Masaajid ku yaalo Bariga Baydhabo.
Gudoomiyaha Maxkamadda darajada 1-aad ee Ciidamada Qalbaka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka Maxkamadda asagoo ku sugan isla masaajidka dilku ka dhacay .
Markay ay Taariikhdu Ahayd 20/06/2017, Maxkamadda Darajada 1’aad Ciidamada Qalabka Sida waxay u fariisatay Dacwad Ciqaabeedkii loo haystay Eedaysanayaasha kala ah :-
1) Maxamad Aadan Cali (Booroow) 22 jir ah Ina Khadiijo Macalin Maxamad ku dhashay Bakool .
2) Soomoow Cali Aadan ( Ilka-Case) 23 jir ah Ina Makaay Isaaq Keeroow ku dhashay Bakool .
3) Xasan C/laahi Ibraahin (Qoor-Gaab) 28 jir ah Ina Xabiibo Maxamad ku dhashay Waajid, Kuwaas oo Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ku soo eedeeyey dambiyada kala ah .
Eedaysanaha 1aad Maxamad Aadan Cali (Booroow), waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka mid yahay Ururka Al-shabaab gaar ahaan Qeybta fulisa dilalka qorshaysan ,gacantiisana uu ku dilay marxuum Sh. Madeer Madgaab Aliyoow oo dukanaya salaada Taraawiixda gudaha masaajidka Sh. Aadan War-Iisho asagoo madaxa uga dhuftay labo xabad oo uu ka riday Bastoolad makaaroof ah 15/06/2017, laguna soo qabtay Bastooladii uu dilka ku gaystay iyo 1 (Hal) Bambo oo F1 ah.
Eedaysanaha 2aad Soomoow Cali Aadan ( Ilka-Case) waxaa lagu soo eedayay in uu ka mid yahay Ururka Al-shabaab gaar ahaan Qaybta qaybta fulisa dilalka qorshaysan, isla markaana uu gacan ku siiyay eedeysanaha 1aad in uu dil ka gaysto gudaha masaajidka war-iisho waxaana lagu soo qabtay Bastooladii uu ku howl gelaayay .
Eedaysanaha 3aad Xasan C/laahi Ibraahim (Qoor-gaab) waxaa lagu soo eedayay in uu ka mid yahay Ururka Al-shabaab uuna u fududeeyay eedeysanaha 1aad in uu dilo marxuumka.
Markay Aragtay:- qiraalka eedaysane Maxamad Aadan Cali (Booroow) uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabab isla-markaana uu 2 xabad ku dhuftay sheekh madeer madgaab Aliyoow oo ku jira salaada taraawiixda dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha 2,3-aad, gurigiisana laga soo qaaday Bastooladii uu falka ku gaystay iyo hal Bambo F1 ah.
Markay Aragtay:- qiraalka eedaysane Soomoow Cali Aadan ( Ilka-Case)uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabab isla-markaana lagu soo qabtay Bastoolad Makaaroof ah howshaasna uu gacan ku siinaaye Xasan C/laahi Ibraahim (Qoor-gaab).
Markay Dhagaysatay:-Markhaatiyaashii la hor keenay Maxkamadda mid midna ay u waydiisay marag furkooda, waxay ka hor cadeeyeen garsoorka hortiisa in ay soo qabteen Eedaysanaha 1aad (Booroow) uuna usheegay in uu asaga gacantiisa ku dilay marxuumka gurigiisana ay kasoo qaadeen bastoolad iyo bambo f1 ah, sidoo kale waxay sheegeen maragu in eedaysanaha 2aad ( ilka-case) ay kasoo qaadeen gurigiisa hal bastoolad oo makaaroof ah, waxay sheegeen maragu in labada eedaysane ay u sheegeen in uu la shaqeeyo eedaysanaha 3aad una qaabilsan yahay inuu soo sahmiyo qofka la dilaayo asagana uu soo sahmiyay sh. madeer madgaab si loo dilo.
Markay Aragtay:- Dambi muujinta la horkeenay maxkamada horteeda oo ay ka mid tahay Cadaymaha laga qoray markhaatiyaasha, qiraalka laga qoray Eedaysanayaasha 1aad,2aad , Labo Bastoolad nooca Makaaroofta ah, hal Bambo F1 ah..
Markay Dhagaysatay: – Doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-ilaalinta CQS iyo qareenka difaacayay eedaysanaha.
Sidaas darteed, Maxkamadda waxaa u caddaatay in sadaxda eedaysane ay yihiin bambiilayaal dembiyada lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay:-
1- Maxamad Aadan Cali (Booroow) waxay ku xukuntay Dil Toogasho ah oo ah qisaasta Marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyoow.
2- Soomoow Cali Aadan ( Ilka-Case) iyo Xasan C/laahi Ibraahim (Qoor-gaab) waxay ku wada xukuntay Xabsi Daa,in.
Previous PostSawirro: Fanaaniinta Cabdi Holand iyo Cabduwahaab Booska oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay muqdisho Next PostMadaxweyne farmaajo oo saacadaha soo socda ka ambabaxaya muqdisho xagee ku wajahanyahay?